ऐश्वर्या देखि मलाइकासम्म, जो ४० काटेर पनि भर्खरकै देखिन्छन् यी हिरोइनहरु (फोटो फिचर) — Riddle Nepal
ऐश्वर्या देखि मलाइकासम्म, जो ४० काटेर पनि भर्खरकै देखिन्छन् यी हिरोइनहरु (फोटो फिचर)
१. ऐश्वर्या राय बच्चन
सन् १९७३ मेन्गलुरुमा जन्मिएकी ऐश्वर्या राय बच्चनले फिल्म मात्रै होइन मोडलिङको दुनियामा समेत ख्याती कमाएकी छन् । १९९४ मा मिस वल्र्डको ताज जितेकी ऐश्वर्या ४३ बर्ष पुगिन् ।
तर उनको सुन्दरता र ग्ल्यामरस आज पनि उस्तै छ । उनको करिअरको कुरा गर्ने हो भने ऐश्वर्याले ‘और प्यार हो गया’ बाट १९९७ मा डेव्यू गरेकी थिइन । यसपछि उनले ‘ताल’, ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘धुम–२’, ‘देवदास’, ‘रोबोट’, ‘गुरु’ जस्ता फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
बलिउडमा आइटम गर्ल र अभिनेत्रीको पहिचान बनाएकी मलाइका ४३ बर्ष पुगेकी छन् । २३ अगस्ट १९७३ मा जन्मिएकी मलाइका १९९८ आएको ‘दिल से’ को गीत ‘छैंया छैंया’बाट चर्चामा आएकी थिइन ।
यसपछि उनले ‘गुड नाल इश्क मिठा’, ‘माही वे’, ‘काल धमाल’, ‘मुन्नी बदनाम हुई’ जस्ता आइटम गीतमा डान्स गरेकी छन् । यसका साथै उनले पूर्वपती अरबाज खानले फिल्म ‘दबंग’मा अभिनय गरिन् ।
३. शिल्पा शेट्टी
८ जुन १९७५ मेन्गलुरु कर्नाटकमा जन्मिएकी शिल्पा आज अभिनेत्री मात्रै होइन एक सफल विजनेश वुमनको परिचय समेत बनाएकी छन् । उनले आफ्नो करिअरको शुरुवात एक मोडलकोरुपमा गरेकी थिइन् । १६ बर्षकै उमेरमा उनले पहिलो पटक लिम्बा ब्राण्डका लागि मोडलिङ गरेकी थिइन् ।
उनले १९९३ मा आएको शाहरुख खान र काजोलको मुख्य भूमिका रहेको ‘बाजीगर’ फिल्मबाट डेव्यू गरेकी हुन् । उनलेको मुख्य भूमिका भएको फिल्म १९९४ मा ‘आग’ आएको थियो । उनले ‘धड्कन’, ‘रिश्ते’ र ‘फिर मिलेंगे’ जस्ता फिल्ममा काम गरेकी थिइन् । उनको पछिल्लो फिल्म ‘डिश्क्याऊ’ हो ।
४. ट्विंकल खन्ना
२९ डिसेम्बर १९७४ मा जम्मिएकी ट्विंकलले बलिउडमा १९९५ मा फिल्म ‘बरसात’ बाट पाइला राखिन् । उनले ‘जान’, ‘जब प्यार किसी से होता है’, ‘मेला’, ‘जोडी नम्बर १’ जस्ता फिल्ममा काम गरिन् । उनको पछिल्लो फिल्म ‘होलिेड’ हो ।
५ अगस्ट १९७४ मा जन्मिएकी काजोल अभिनेत्री तनुजाकी छोरी हुन् । उनले १९९२ मा फिल्म ‘बेखुदी’ बाट बलिउडमा पाइला राखेकी हुन् । उनले १९९३ मा ‘बाजीगर’ मा काम गरिन् । जुन फिल्मले उनलाई स्टार बनाइदियो । उनले ‘दिवाले दुल्हानियां ले जाएंगे’, ‘प्यार किया तो डरना क्या’, ‘हलचल’, ‘गुण्डा राज’, ‘प्यार तो होना ही था’, ‘इश्क’ जस्ता फिल्ममा काम गरेकी छन् । उनको पछिल्लो फिल्म ‘दिलवाले’ हो ।
६. सुष्मिता सेन
१९ नोभेम्बर १९७४ मा जन्मिएकी सुष्मिता १९९४ मा भारतबाट पहिलो मिस युनिवर्स बनेकी थिइन् । १९९६ मा फिल्म ‘दस्तक’ बाट बलिउठमा डेव्यू गरेकी सुष्मितको अहिलेसम्म ‘बीवी नम्बर वन’, ‘मैंने प्यार क्यों किया’, ‘मैं हुं न’ जस्ता फिल्ममा काम गरेकी छन् । उनी २०१० ‘नो प्रोव्लम’मा पछिल्लो पटक देखिइन् ।
४ नोभेम्बर १९७० मा आन्ध्र प्रदेशको राजधानी हैदराबादमा जन्मिएकी तब्बुले फिल्म करिअरको शुरुवात १५ बर्षको उमेरमै गरेकी थिइन् । १९८५ मा आएको ‘हम नौजवान’ उनको पहिलो फिल्म हो । उनले ‘विजयपथ’, ‘जीत’, ‘चाची ४२०’, ‘कोहराम’, ‘बीबी नम्बर वन’ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छन् । उनले पछिल्लो पटक ‘दृश्यम’ मा काम गरिन् ।
८. करिश्मा कपुर
करिश्माले बलिउडमा १९९१ मा आएको ‘प्रेम कैदी’ फिल्मबाट डेव्यू गरिन् । उनले ‘जिगर’, ‘राजा बाबू’, ‘अन्दाज अपना अपना’, ‘सुहाग’, ‘रिश्ते’, ‘जुबैदा’ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
९. सोनाली बेंन्द्रे
१ जनवरी १९७५ मा मुम्बईमा जन्मिएकी सोनालीले आफ्नो करिअर शुरु गरेकी हुन् । उनले १९९४ मा रिलिज भएको फिल्म ‘आग’बाट डेव्यू गरेकी थिइन् । उक्त फिल्म फ्लप भयो । उनले ‘इंग्लिश बाबू देशी मेम’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘सरफरोश’, ‘मेजर साहब’, ‘दिलजले’, ‘जख्म’ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
२८ मार्च १९७६ जोधपुर, राजस्थानमा जन्मिएकी चित्रांगदाले २००५ मा फिल्म ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ बाट करिअर शुरुवात गरेकी थिइन् । उनले ‘सरी भाई’, ‘बसरा’, ‘ये साली जिन्दगी’, ‘देशी व्याइज’, ‘जोकर’, ‘इनकार’ जस्ता फिल्ममा काम गरेकी छन् । उनलाई बलिउडमा बोल्ड अभिनेत्री मानिन्छिन् ।
११. रविना टण्डन
निर्माता रवि टण्डनको घरमा २६ अक्टोबर १९७४ मा जन्मिएकी रविना ४२ बर्ष पुगेकी छन् । उनले आफ्नो करिअरको शुरुवात सलमान खानसँग फिल्म ‘पथ्थर के फुल’ १९९१ बाट शुरु गरिन् । उनले ‘मोहरा’, ‘तू चीन बडि है,’ ‘मस्त मस्त’, ‘परम्परा’, ‘जीना मरना तेरे संग’, ‘लाडला’, ‘दिलवाले’, ‘अन्दाज अपना– अपना’ फिल्ममा काम गरेकी छन् । उनको यो बर्ष ‘मातृ’ फिल्म आएको छ । एजेन्सी